Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment पहिलो चरणमा ५ सय नेपाली श्रमिक लैजाने गरी इजरायली श्रम बजार खुल्यो - Pnpkhabar.com
काठमाडौं, १५ असोज : नेपाली श्रमिक लैजानका लागि इजरायल र नेपालबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । बुधबार इजरायल र नेपालबीच नेपाली श्रमिक लैजान र ‘एग्रिकल्चर सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’ स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सम्झदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको इजरायलमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
इजरायली परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । नेपाली श्रमिक लैजान समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अब इजरायली श्रम बजार नेपालीका लागि खुला भएको छ । समझदारीपत्रमा नेपालको तर्फबाट इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अन्जान शाक्य र इजरायलको तर्फबाट इजरायली परराष्ट्र मन्त्री गबी अश्केनाजीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
केयर गिभरको क्षेत्रमा पहिलो चरणमा ५ सय नेपाली श्रमिक इजरायलले लैजाने छ । तर त्यसका लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने भने बाँकी रहेको छ । यो प्रोटोकलमा छिट्टै नेपालका लागि इजरायली राजदूत र नेपाली अधिकारीले काठमाडौंमा हस्ताक्षर गर्ने दूतावासले जनाएको छ ।
नेपाली श्रमिकले इजरायलको केयरगिभर क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, होटल ररेष्टुरेष्ट, निर्माण लगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर पाउनेछन् । तर प्रत्येक क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर खुल्नका लागि इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया खुल्ला हुनेछ ।
यसकासाथै राजदूत डा. शाक्यले विभिन्न विधामा विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति प्रदान, स्वास्थ्य, शिक्षा, उर्जा, पर्यटन, उद्यमशीलता विकास, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिएको र इजरायली परराष्ट्र मन्त्री नेपालसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको दूतावासले जनाएको छ ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा राजदूत डा. शाक्यले दक्ष तथा अर्धदक्ष नेपाली श्रमिकहरूका लागि इजरायलको कृषि, सेवा क्षेत्र, निर्माण लगायतका रोजगारीका क्षेत्रहरु पनि खुला गर्न मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।